Umaka: ukuxoxisana ngokuthengisa | Martech Zone
Umaka: ukuxoxisana ngokuthengisa
Izibonelo Ezi-6 Zendlela Amabhizinisi Abekwazi Ngayo Ukukhula Ngesikhathi Sobhubhane
ULwesibili, April 27, 2021 ULwesibili, April 27, 2021 Douglas Karr
Ekuqaleni kwalolu bhubhane, izinkampani eziningi zisika izabelomali zazo zokukhangisa nezokumaketha ngenxa yokwehla kwemali engenayo. Amanye amabhizinisi acabanga ukuthi ngenxa yokudilizwa kwabantu abaningi, amakhasimende azoyeka ukusebenzisa imali ngakho-ke kwehliswa isabelomali sokukhangisa nokukhangisa. Lezi zinkampani zizingele phansi ngenxa yezinkinga zomnotho. Ngaphezu kwezinkampani ezingabaza ukuqhubeka noma ukwethula imikhankaso emisha yokukhangisa, iziteshi zethelevishini nezomsakazo nazo bezinenkinga yokuletha nokugcina amakhasimende. Ama-ejensi nokumaketha